Kenya oo shaki Shabaab u xirtay sarkaal ka shaqeynayey aqalka baarlamaanka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Booliska dalka Kenya ayaa axaddii soo xiray Ali Abdulmajid oo muddo dheer ka mid ahaa shaqaalaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Kenya.
Ninkaan ayaa looga shakiyey inuu Alshabaab ku saacidayo weerarro ay la damacsanyihiin dhismaha baarlamaanka, Jaamcadda Nairobi iyo goobo kale.
Waxaa sidoo kale, ninkaas looga shakisanyahay inuu Alshabaab dhaqaale uga uruuriyo gudaha Kenya, waxaana la xiray kadib markii ay shaacday warbixin sir ah oo qoreen Sirdoonka Kenya.
Ndegwa Muhoro, oo ahaa Agaasimaha Waaxda Dambi-baarista Kenya ayaa xaqiijiyey in Ali Abdulmajid uu xiranyahay, ayna weydiinayaan su’aalo, baaritaanna ay ku hayaan.
Warbixin sir ah oo lasoo saaray todobaadkii hore oo ay wakaaladda wararka Reuters aragtay ayaa muujineysa in Alshabaab sirdoon badan u dirtay Kenya, si u geystaan weeraro xoog leh oo lagu hoobto.
Goobaha warbixintaan tilmaamtay in Alshabaab beegsanayaan ayaa waxaa ka mid ah baarlamaanka Kenya, Jaamacadda Nairobi iyo kaniisadda Pentecostal Church.
Warbixintaas ayaa lagu sheegay in kooxda ka mid ah Alshabaab ee weerar ku qaadi rabta goobahaas ay adeegsanayaan qof ka shaqeeya baarlamaanka, islamarkaana xubin firfircoon ka ahaa Masjidka Pumwani Riyadh.
Booliska Kenya ayaa leh “Ali Abdulmajid waxaa aad loogu yaqaannay inuu caanka ka ahaa Masjidka Pumwani Riyadh, kana shaqeeyo baarlamaanka, taasoo keentay in lasoo qabto”.
Ali Abdulmajid ayaa horay dowladda Kenya ugu eedeysay inuu xiriir dhaqaale uruurin la leeyahay Alshabaab. Sidoo kale, waxaa ninkaas sanadkii 2011 magaciisa soo qoray Guddiga La Socodka Hubka Somalia Eritrea, kuwaasoo sheegay suurtagalnimada inuu ku xiranyahay dhaqdhaqaaqyo argagixiso, hase ahaatee wax eed ah xilligaas looma jeedin.
Senator Hassan Omar, oo ah xildhibaan laga soo doorto gobolka Xeebta Kenya ee Mombasa oo uu Ali Abdulmajid kasoo jeedo ayaa shaki geliyey eedeynta loo jeediyey ninkaas ee ah inuu ku xiranyahay Alshabaab.
Senator Hassan Omar ayaa sheegay in dhawaanahan dowladda Kenya ay beegsaneysay dadka xiran labiska Islaamka, iydoo aan lagu heyn cadeymo buuxa.